ရယ်ချင်ရင်ရယ်ကြရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ရယ်ချင်ရင်ရယ်ကြရအောင်
Posted by Don Juan Ronald on Sep 25, 2011 in Aha! Jokes, Satire |7comments
တရက်တ၌အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဂျော့ခ်ျဘုရ်ှသည်ခေါင်းကိုက်၍၊ ဆရာဝန်ထံသွားပြသည်၊ ဆရာဝန်မလေးကသူ့၏ဦးခေါင်းကို brain scan လုပ်ပေးလိုက်သည်၊ နောက်နေ့ဂျော့ခ်ျဘုရ်ှသူ၏ result ကိုသွားကြည့်သောအခါ၊
ဆရာဝန်မလေးကဆက်ပြီး “ ဒါမျိုးရောဂါကျမတို့ဗမာပြည်ကလူကြီးတွေဖြစ်နေတာကြာလှပြီ၊ သမ္မတကြီးကခုတလောမှဖြစ်တာစိတ်မညစ်ပါနဲ့ အားလည်းမငယ်ပါနဲ့လူနာဖော်အများကြီးရှိပါတယ်”ဟူသတည်း။
တချိန်ကဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ်ပြည်ထောင်စုသမတနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာ့ဆိုရှယ်လစ် ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံများ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်၊ သူတို့တတွေမပြိုကွဲခင်ကပေါ့၊ တရက်တ၌ဒီဆိုရှယ်လစ်ညီအစ်ကိုမောင်နှမနိုင်ငံများသည်စုဝေးကြပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ပြုလုပ်ကြသည်။
တနေ့တ၌ကျနော်တို့ရဲ့ Moscow မြို့တော်တွင်ရှိသော၊ အသားငါးရောင်းသည့်ဈေးဆိုင်တဆိုင်မှငါးရောင်းသမတယောက်သည်၊ ငါးအရှင်လတ်လတ်ကိုခုတ်ထင်းရာ၌မတော်တဆငါး၏ဆူးသည်လွင့်ထွက်လာ၍ ၎င်းအမျိုးသမီး၏လက်ျာဖက် မျက်စိကိုထိုးမိရာမျက်စိကွဲသွားသည်၊ ကံကောင်းလို့နီးနားတွင်ဆရာဝန်တယောက်ရှိနေ၍၊ ၎င်းဆရာဝန်သည်ချက်ချင်းငါး၏မျက်စိကိုခွဲထုတ်ပြီး၊ ထိုအမျိုးသမီး၏မျက်စိအား အစားထိုးကုသပေးလိုက်သည်၊ ထိုခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်သွားသည့်အပြင်သူမ၏ညာမျက်လုံးသည်အရင်ထက်ပို၍ကြည်လင်စွာမြင်ရသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
ဒုတိယ ချက်ဂိုဆလိုဗားကီးယားဆိုရှယ်လစ်ပြည်ထောင်စုသမတနိုင်ငံကိုလ်စားလှယ်၏ တင်ပြချက်ကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကျေးရွာတရွာမှာ၊ နို့ညှစ်နွားမွေးခြံတခုတွင် အလုပ်သမားတဦးသည၊်နွားနို့ညှစ်ရင်းနှင့်ကွဲပဲ့နေသောနွားနို့ခံသောပုံး၏အနားကိုထိရှ၍ လက်ညိုးကျိုးသွားသည်၊ ကံကောင်း၍အနားတွင်နွားနို့လာဝယ်သောဆရာဝန်တဦးက ချက်ချင်းနွားမ၏နို့သီးများထဲမှနို့သီးတခုကိုခွဲစိတ်၍ထိုအလုပ်သမား၏ လက်ညိုးအားအစားထိုးကုသပေးလိုက်သည်၊ အထူးအောင်မြင်သွားပါသည်၊ ၎င်းနို့သီးသည်မူလနွားမကိုလ်ပေါ်တွင်ရှိစဉ်တရက်လျင်နွားနို့၂ဂါလံသာထွက်ပြီး ယခုဒီအလုပ်သမားဆီရောက်လာသောအခါ တနေ့လျင်နွားနို့၅ဂါလံထွက်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
နားကွဲလောက်အောင်သောင်းသောင်းဖြဖြသော သြဘာသံများကောင်းကင်ယံအထိ ထိုးဖောက်ရောကရှိ်သွားသည်။
ဆိုဗီယက်ကိုလ်စားလှယ်သည်အလွန်စိတ်ဆိုး၍ “ ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ၊ အဲဒါကိုဘယ်သူမြင်လို့လဲ ?” ဟုအော်ဟောက်ပြီးမေးလိုက်သည်၊ ထိုအချိန်ချက်ဂိုကိုလ်စားလှယ်ကဟိုငါးမျက်စိတပ်ဆင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးကိုတိုင်မြင်လိုက်သည်”ဟူသတည်း။
(ဆိုဗီယက်သည်တချိန်တုံးက ချက်ဂို ကိုတင့်ကားများဖြင့်အတင်းဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ဖူးသည်၊ ဆိုရှယ်လစ်နှင့်ကွန်မြူနစ်တို့သည်အချင်းချင်ဖင်ချလေ့ရှိပြီး၊ မှန်ကန်သောစကားပြောလေ့မရှိပါ)
(လူကြီးများဟုဆိုရာ၌ဗိုလ်များနှင့်အရပ်သားများကိုနိုင်စားနေတဲ့လူပုဂိုလ်ကြီးများကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ adult ကိုဆိုလိုပါသည်)အင်္ဂလိပ်စာကျူရှင်တခုမှာဆရာမကအရပ်လေးမျက်နှာကိုခလေးများအားသင်ပေးနေသည်၊ ဆရာမသည်သူမနှင့်အတူ East , West , North , South ကိုလိုက်ဆိုခိုင်းသည်။ ခလေးတယေါက်သည် South ဆိုသောနေရာရောက်လျင်သူတန့်၍မဆိုတော့ပါ၊ ဆရာမကအတန်တန်ဆိုခိုင်းသော်လည်း၎င်းခလေးသည်လိုက်မဆိုပါ၊ ဆရာမကအဘယ်ကြောင့်လိုက်၍မဆိုသနည်းဟုမေးသောအခါ၊ ကျောင်းသားခလေးက “ အမေမှာထားတယ် South ဆိုတာညစ်ပတ်တယ်၊ မပြောရဘူး” ထိုအချိန်ဆရာမက “ အမလေးသားသားရယ်၊ သားသားအမေရဲ့South ကသာညစ်ပတ်တာ၊ ဆရာမရဲ့South ကသန့်ရှင်းတယ်၊ အရေးမကြီးဘူးလိုက်ဆို၊ လိုက်ဆို”
(ထိုင်ဝမ်ဟာသကိုဗမာနှင့်ဆီလျော်အောင်ပြုပြင်ထားသည်။ ဆရာမ ရေ ကန်တော့၊ ကန်တော့)
South Park တဲ့..
တော်သေးတာပေါ့။ တောင်ပင်လယ်ဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကောင်းမလေးတွေအရှေ့မှာ တော်တော်အားယူပြီးပြောရမှာ။
မောရ လွန်းလို့ ..
Chivas Regal ပြောတာနော်
south sea is in the south part ဆိုလား
တော်ပီ အိမ်ပြန်ပြီး ၆ပတ်ကို ၅၀၀ဖိုးလောက်ထိုးလိုက်ဦးမယ်
ဆ ရာ တို့ ရေ ~~~
Side dish ကို ဘဲ မဲ ပြီး ၊
Maine dish ကို လစ် လျူ ရှု ထား တော့ ၊
ကြာ လျှင် ကျ နော် မျိုး ဟာ အကျင့် တွေ ပျက် ကုန် ပါ ပြီ ဗျာ ~~~။
နေ့ စဉ် ဂျူတီဝင်ရမယ်ဟေ့ ဆိုရင် ပြောပါတယ်
ဦးဒွန်ရယ် နေ့ စဉ် ဘဝအမောတွေပြေဖို့ 
တွေ့ သမျှ မြင်သမျှ ကို ဟာသအဖြစ် ပြောင်းတွေးနေရတာ မြန်မာနိုင်ငံသူားတွေရယ်ပါ